Kheyre: “Waxaan diyaar u nahay in aan fulino balanta idinka qaadnay”. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kheyre: “Waxaan diyaar u nahay in aan fulino balanta idinka qaadnay”.
Kheyre: “Waxaan diyaar u nahay in aan fulino balanta idinka qaadnay”.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in shirkii ka dhacay magaalada Washington oo uu ka qeyb galay Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle la isku raacay in Soomaaliya ay soo gaartay meel wanaagsan oo aduunyada ay u riyaaqday.
Sidoo kale Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in masuuliyiintii Hay’adda Lacagta aduunka iyo Bankiga dhexe ee magaalada Washington uu kula kulmay Wasiirka Maaliyadda isku afgarteen in Soomaaliya loo yagleelo lacagta Shilin Soomaaliga.
“Sanad ka hor waxaan ka balanay inaan rabno inaan wax ka qabano dhaqaalaha wadanka maalmo ka hor waxaa magaalada Washington shir uga qeyb galay wasiirkeena Maaliyadda, halkaasi waxaa la isku raacay Soomaaliya iney soo gaartay meel aduunyada aanu maleynin inaan gaarno sanad ka dib, halkaasi waxaa la isku raacay in dib loo yagleelo shilinka Soomaaliga waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena dhexe” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa Yiri” Waxaa la isku raacay in Bankiga aduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida Midowga Yurub bilaabi doonaan in Malaayiin dollar ugu deeqaan Soomaaliya Akoonka Dowladdana lagu soo shubi doono.
Previous articleMusharaxiinta u taagan qabashada xilka Gudoonka Barlamaanka oo manta isdiiwangalinaya
Next articleWasiirka Cadalaadda oo hortagay Mudanayaasha Aqaalka Sare